ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဂိုးပေါက်မှာ နံပါတ်တစ်နေရာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ့် ဒီဂီယာ နှင့် ဟင်ဒါဆန်တို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ကိန်းဂဏန်းများ - Myanmar Man United.
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဂိုးပေါက်မှာ နံပါတ်တစ်နေရာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ့် ဒီဂီယာ နှင့် ဟင်ဒါဆန်တို့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ကိန်းဂဏန်းများ
htet htet | 17/07/2021 | News | No Comments
ဒီနှစ်အပြောင်းအရွေ့ဈေးကွက်မှာ ယူနိက်တက်အတွက် အကြီးအကျယ်ခေါင်းခဲစရာ ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂိုးသမားပြဿနာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဒီကနေ့မနက်မှာတော့ သတင်းထူးလာပါတယ်။အိုလေ ဂန်းနား ဆိုးရှားအနေနဲ့ လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာ ဒေးဗစ် ဒီဂီယာ နှင့် ဒီး ဟင်ဒါဆန်တို့ကြား ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဟင်ဒါဆန်က (၁,၁၂၅ ) မိနစ် ကစားခဲ့ပြီး ဒီဂီယာက ( ၂,၂၉၅ ) မိနစ် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ယူနိက်တက်က တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် အပြောင်းအရွေ့သတင်းတွေမှာ နာမည်ကြီးသတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့Rudy Galettiကတော့ ယူနိက်တက်ဟာ ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကို ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဒီနှစ်မှာ အဌားထွက်ကစားစေလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် ဒီဂီယာကတော့ သူ့ရဲ့ မြင့်မားတဲ့လစာကြောင့် အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေချင်ပြီး နံပါတ်တစ်နေရာရောက်အောင်ပြန်ကြိုးစားမယ်လို့တော့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ယူနိက်တက်ဘက်က ခိုင်မာတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်အရ ယူနိက်တက်ဟာ အသင်းရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကစားသမားကို အဌားထွက်ကစားစေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာ ဒီဂီယာကို နံပါတ်တစ်ဂိုးသမားကနေ ဟန်ဒါဆန်နဲ့ အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဂီယာဟာ အသင်းမှာ လခအများဆုံးရနေတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီး ယူရိုပါလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ ပယ်နတီတစ်လုံးမှမဝင်တဲ့အပြင် လွဲချော်ခဲ့လို့ ဝေဖန်မှုတော်တော်လေးခံခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာလည်း ယူနိက်တက်အသင်းရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပြင်းတဲ့ ဂိုးသမားဟန်ဒါဆန်က ဒီနှစ်မှာ နံပါတ်တစ်နေရာကို မရဘူးဆိုရင် အသင်းကထွက်သွားမယ်လို့ ပြောကြားထားတဲ့အတွက် ဒီဂီယာအတွက် ယူနိုက်တက်တို့ ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိပါဘူး။
Rudy Galettiရေးသားထားကတော့ ယူနိက်တက်အသင်းဟာ ဒီဂီယာရဲ့များပြားတဲ့လစာငွေကြောင့်လည်း ဒီလိုဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်လာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်.ဒီဂီယာဟာ အိုးထရက်ဖို့ကနေ လာလီဂါအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ဗန်လန်စီယာနဲ့ဗီလာရီးရဲလ်အသင်းတို့ကိုသွားနိုင်ချေများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအသင်းတွေက ဒီဂီယာကို စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ ဟန်ဒါဆန်ကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်နဲ့ ဒီဂီယာနှိုင်းယှဉ်ချက်မှာ ဟန်ဒါဆန်ကပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၇၆ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဂိုးပေါက်ကာကွယ်ထားနိုင်ပြီး ဒီဂီယာကတော့ ၆၇ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ( ၂ ) ဦးကြားမှာ ပွဲကစားချိန် ကွာဟမှု ကြီးမားနေပေမယ့် ဟင်ဒါဆန်ရဲ့ ပါဝင်မှုက သုံးသပ်ချက်ထုတ်ဖို့အတွက် လုံလောက်မှုရှိတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။နောက်ပြီး စာရင်းအချက်အလက်တွေအရ သူကစားချိန်မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်က ပိုပြီးအောင်မြင်မှုရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘောလုံးဒေတာ ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FBRef အရ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဟင်ဒါဆန် မိနစ် ( ၃၀ ) အထက်နှင့်အထက် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ ပျမ်းမျှ ( ၂.၄၆ ) မှတ်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေးဗစ် ဒီဂီယာ ကစားချိန်မှာတော့ တစ်ပွဲ ပျမ်းမျှ ( ၁.၇၃ ) မှတ်သာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဂီယာ ပွဲထွက်ကစားခဲ့တဲ့ ( ၂၆ ) ပွဲမှာ ယူနိုက်တက်က ( ၁၂ ) ပွဲ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဟင်ဒါဆန် ကစားခဲ့တဲ့ ( ၁၂ ) ပွဲမှာတော့ ယူနိုက်တက်က ( ၉ ) ပွဲထိ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ယူနိုက်တက်က ဟင်ဒါဆန် ကစားတဲ့ ပွဲစဉ်တွေမှာ ပိုပြီး ရလာဒ်ကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာ ထင်ရှားပါတယ်။
နောက်ပြီး ပွဲအရေအတွက် လျော့နည်းခဲ့ပေမယ့် ဟင်ဒါဆန် က ပြိုင်ပွဲစုံ clean sheets ( ၁၃ ) ကြိမ် ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီဂီယာကတော့ ( ၁၂ ) ကြိမ်သာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဟင်ဒါဆန် က ဒီဂီယာ ထက်ပိုပြီး တက်ကြွမှုရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။
အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်က ပရီးမီးယားလိဂ် ( ၁၂ ) ပွဲမှာ ဖြတ်တင်‌ဘော ( ၉ ) ကြိမ်ကို တားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး ဒီဂီယာကတော့ ( ၂၆ ) ပွဲမှာ ( ၉ ) ကြိမ်သာ ကြိုတင် ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယူနိက်တက်အတွက်က ရွေးချယ်စရာသိပ်မရှိလို့ ၂ယောက်ထဲကတစ်ယောက်သေချာရွေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိက်တက်မှာ ဒီနွေမှာအသစ်ရောက်လာတဲ့တွမ်ဟန်တန်ကလည်းရှိနေသေးပါတယ်။ မန်ဖန်တွေရောဘယ်လိုထင်လဲ ဒီဂီယာကို အဌားချသင့်တယ်ထင်လား?
ယူနိုကျတကျရဲ့ ဂိုးပေါကျမှာ နံပါတျတဈနရောအတှကျ တိုကျပှဲဝငျကွမယျ့ ဒီဂီယာ နှငျ့ ဟငျဒါဆနျတို့ရဲ့ ကံကွမ်မာကို အဆုံးအဖွတျပေးမယျ့ ကိနျးဂဏနျးမြား
ဒီနှဈအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျမှာ ယူနိကျတကျအတှကျ အကွီးအကယျြခေါငျးခဲစရာ ပွဿနာတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ ဂိုးသမားပွဿနာနဲ့ပကျသကျပွီး ဒီကနမေ့နကျမှာတော့ သတငျးထူးလာပါတယျ။အိုလေ ဂနျးနား ဆိုးရှားအနနေဲ့ လာမယျ့ ဘောလုံးရာသီမှာ ဒေးဗဈ ဒီဂီယာ နှငျ့ ဒီး ဟငျဒါဆနျတို့ကွား ရှေးခယျြမှုပွုလုပျရဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဟငျဒါဆနျက (၁,၁၂၅ ) မိနဈ ကစားခဲ့ပွီး ဒီဂီယာက ( ၂,၂၉၅ ) မိနဈ ပါဝငျခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ။
ယူနိကျတကျက တရားဝငျထုတျပွနျလိုကျတာမဟုတျပမေယျ့ အပွောငျးအရှသေ့တငျးတှမှော နာမညျကွီးသတငျးထောကျတဈဦးဖွဈတဲ့Rudy Galettiကတော့ ယူနိကျတကျဟာ ဒေးဗဈဒီဂီယာကို ရဲ့ကံကွမ်မာကို ဒီနှဈမှာ အဌားထှကျကစားစလေိမျ့မယျလို့ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သို့သျော ဒီဂီယာကတော့ သူ့ရဲ့ မွငျ့မားတဲ့လစာကွောငျ့ အသငျးမှာပဲဆကျရှိနခေငျြပွီး နံပါတျတဈနရောရောကျအောငျပွနျကွိုးစားမယျလို့တော့ ပွောကွားထားပါတယျ။
ယူနိကျတကျဘကျက ခိုငျမာတဲ့ သတငျးရငျးမွဈတဈဦးရဲ့ ပွောဆိုခကျြအရ ယူနိကျတကျဟာ အသငျးရဲ့ဈေးအကွီးဆုံးကစားသမားကို အဌားထှကျကစားစတေော့မယျလို့ဆုံးဖွတျထားကွောငျးသိရပါတယျ။ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီမှာ မနျခကျြစတာယူနိကျတကျအသငျးဟာ ဒီဂီယာကို နံပါတျတဈဂိုးသမားကနေ ဟနျဒါဆနျနဲ့ အပွောငျးအလဲ လုပျခဲ့ပါတယျ။
Rudy Galettiရေးသားထားကတော့ ယူနိကျတကျအသငျးဟာ ဒီဂီယာရဲ့မြားပွားတဲ့လစာငှကွေောငျ့လညျး ဒီလိုဆုံးဖွတျမှုဖွဈလာစတေယျလို့ဆိုပါတယျ.ဒီဂီယာဟာ အိုးထရကျဖို့ကနေ လာလီဂါအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ဗနျလနျစီယာနဲ့ဗီလာရီးရဲလျအသငျးတို့ကိုသှားနိုငျခမြေားတယျလို့ဆိုပါတယျ။ အဲ့ဒီအသငျးတှကေ ဒီဂီယာကို စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈကတော့ ဟနျဒါဆနျကစားခှငျ့ရတဲ့အခြိနျနဲ့ ဒီဂီယာနှိုငျးယှဉျခကျြမှာ ဟနျဒါဆနျကပရီးမီးယားလိဂျမှာ ၇၆ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဂိုးပေါကျကာကှယျထားနိုငျပွီး ဒီဂီယာကတော့ ၆၇ရာခိုငျနှုနျးဖွဈပါတယျ။
သူတို့ ( ၂ ) ဦးကွားမှာ ပှဲကစားခြိနျ ကှာဟမှု ကွီးမားနပေမေယျ့ ဟငျဒါဆနျရဲ့ ပါဝငျမှုက သုံးသပျခကျြထုတျဖို့အတှကျ လုံလောကျမှုရှိတယျလို့ ယူဆမိပါတယျ။နောကျပွီး စာရငျးအခကျြအလကျတှအေရ သူကစားခြိနျမှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျက ပိုပွီးအောငျမွငျမှုရှိခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။
ဘောလုံးဒတော ဝကျဆိုဒျတဈခုဖွဈတဲ့ FBRef အရ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဟငျဒါဆနျ မိနဈ ( ၃၀ ) အထကျနှငျ့အထကျ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲစဉျတှမှော ပမျြးမြှ ( ၂.၄၆ ) မှတျရယူနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒေးဗဈ ဒီဂီယာ ကစားခြိနျမှာတော့ တဈပှဲ ပမျြးမြှ ( ၁.၇၃ ) မှတျသာ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒီဂီယာ ပှဲထှကျကစားခဲ့တဲ့ ( ၂၆ ) ပှဲမှာ ယူနိုကျတကျက ( ၁၂ ) ပှဲ အနိုငျရခဲ့ပါတယျ။ဟငျဒါဆနျ ကစားခဲ့တဲ့ ( ၁၂ ) ပှဲမှာတော့ ယူနိုကျတကျက ( ၉ ) ပှဲထိ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျက ဟငျဒါဆနျ ကစားတဲ့ ပှဲစဉျတှမှော ပိုပွီး ရလာဒျကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာ ထငျရှားပါတယျ။
နောကျပွီး ပှဲအရအေတှကျ လြော့နညျးခဲ့ပမေယျ့ ဟငျဒါဆနျ က ပွိုငျပှဲစုံ clean sheets ( ၁၃ ) ကွိမျ ရယူနိုငျခဲ့ပွီး ဒီဂီယာကတော့ ( ၁၂ ) ကွိမျသာ ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ဟငျဒါဆနျ က ဒီဂီယာ ထကျပိုပွီး တကျကွှမှုရှိတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။
အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျက ပရီးမီးယားလိဂျ ( ၁၂ ) ပှဲမှာ ဖွတျတငျ‌ဘော ( ၉ ) ကွိမျကို တားဆီးနိုငျခဲ့ပွီး ဒီဂီယာကတော့ ( ၂၆ ) ပှဲမှာ ( ၉ ) ကွိမျသာ ကွိုတငျ ဖွတျတောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ယူနိကျတကျအတှကျက ရှေးခယျြစရာသိပျမရှိလို့ ၂ယောကျထဲကတဈယောကျသခြောရှေးရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ယူနိကျတကျမှာ ဒီနှမှောအသဈရောကျလာတဲ့တှမျဟနျတနျကလညျးရှိနသေေးပါတယျ။ မနျဖနျတှရေောဘယျလိုထငျလဲ ဒီဂီယာကို အဌားခသြငျ့တယျထငျလား?
သရဲနီဘုရင်ကြီး စီရော်နယ်ဒို ထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်လျက်ရှိတဲ့ ဟက်ထရစ်အကြိမ်ရေအများဆုံး ကစားသမား ၅ ဦး
လာမယ့်ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ပြန်လည်စိန်ခေါ်မယ့် ယူနိုက်တက်နဲ့ ဆိုးလ်းရှားအတွက် ၀ှက်ဖဲဖြစ်လာမယ့် အာမက်ဒီယာလို